Mhute yemvura: hunhu, mashandisiro uye kukosha | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 31/03/2021 09:33 | Meteorology
El chiutsi chemvura hachisi chinhu chinopfuura mamiriro e aeration yemvura kana ichinge yapfuura kubva kune yakasviba nyika kuenda kune gaseous nyika. Kuti mhute yemvura iitike, inofanirwa kuburitswa kune tembiricha padyo nenzvimbo inovira. Iyi gasi yakakosha kune iyo hydrological kutenderera, kuumbwa kwehupenyu uye kudziya kwepasirese.
Naizvozvo, isu tichaongorora zvakadzama kuti mvura mhute, ayo maitiro uye kukosha.
2 Kuumbwa kwemvura mhute
3 Zvishandiso zvemvura mhute
Icho hachisi chinhu kunze kwekutumira nyika yemvura kana ichinge yashanduka kubva ino mvura mamiriro kuenda kune gasi nyika. Mhute uyu hauna ruvara uye hauna hwema, kunyange hunowanzo kuwana chena uye kunoratidzika makore kana uchinge wapindirwa nemadonhwe madiki emvura ari mune yakasviba mamiriro. Mvura yemvura zvakare inogona kudzikisa kuoneka zvichienderana nekuwanda kwayo uye kwauri. Semuenzaniso, isu tinoona kuti mvura mhute inogona kuoneka mushe kana isu tabuda mushower uye tine mawindo ekugezera akavharwa. Apa ndipo panounganidzwa nemhute yemvura yoita mvura sezvo inonamira kumadziro.
Mune zvakasikwa, huni hunogadzirwa kana mvura yepasi ichidziya kuburikidza nehumwe hwesimba. Aya maitiro emakomo anoguma nezvitubu zvinopisa, magiza, fumaroles, uye mamwe marudzi emakomo anoputika. Magetsi anokosha chaiwo. Mhepo inogona zvakare kugadzirwa nenzira yehunyanzvi kuburikidza nehurongwa hwetekinoroji senge mafuru ekufambisa boiler uye magetsi enyukireya. Nenzira iyi, tinoziva izvozvo mvura mhute yakakosha sosi yesimba kumaindasitiri. Uye ndezvekuti mazhinji eanogadzira maitiro ekugadzira magetsi anofunga nezve kugona kwemhepo mvura yekufambisa turbines.
Iyo inogona kucherechedzwa pazuva rehigh humidity, mune mhute iripo panguva yemambakwedza kana kana nharaunda iri kutonhora uye mhepo iri yechitanhatu kuburikidza nemuromo. Mhepo iri mumuromo ine hunyoro uye mvura inoripirwa nekusangana nemhepo inotonhora.
Kuumbwa kwemvura mhute
Ngatione kuti ndeipi nzira huru inogadzirwa nemhute yemvura. Iko kufashaira kwemvura chiitiko chemuviri umo chinhu ichi chinoshanduka kubva pamvura kuenda kune gaseous mamiriro semhedzisiro yekuratidzwa kwenguva refu pakupisa kukuru. Iyo inotonhora tembiricha yemvura ndeye 100 degrees. Iwo ari patembiricha idzi apo mvura inotanga kufashaidza. Zvisinei, mvura haifanire kunge ichiraramira mweya wemvura kuti uvepo.
Kana mvura yacho yangosvika panofashaira, inotora kupisa kuti ishandise mvura kuita mhute, asi tembiricha yacho haichazowedzera. Yese mvura yemvura inozopedzisira yachinja kuita chiutsi kudzamara hwese hwemvura hwapera. Isu tinoona maitiro aya nyore kwazvo kana tikabika mvura muhari. Tinofanira zvakare kuziva kuti tembiricha iri kufashaira yemvura inoenderana nedzvinyiriro iyo inonzi chinhu inoiswa. Semuenzaniso, mune yekumanikidza yekubika kubika kwechikafu kunoitika nekukurumidza kupihwa kumanikidza kunoitwa nehari pachayo, iyo inotonhora tembiricha yemvura iri pasi.
Zvishandiso zvemvura mhute
Sezvaunogona kutarisira, mvura mhute ine akasiyana mashandisiro munzvimbo zhinji. Ngatione kuti izvi zvese zvinoshandiswa ndezvipi:
Sterilize chikafu: mvura mhute inoshandiswa kubvisa utachiona huripo mukudya. Zvizhinji zvezvipembenene zvinofa kana zvikaonekwa nekupisa kwakanyanya. Neichi chikonzero, chiutsi chinoshandiswa kutapudza mvura kana zvimwe zvinhu zvakaita sedzimba dzinoshandiswa kubhadhara kurasikirwa.
Injini yekushanda: Kune akawanda injini dzinoshanda pamwe nekupisa kwemafuta anoshandura iwo ekupisa kwesimba kweimwe huwandu hwemvura kuita michina simba. Aya ndiwo mashandiro emagetsi enjini.
Atomize: atomizing hapana chimwe kunze kwekutsemura zvimwe zvidiki zvidimbu. Maitiro anotendera kuti chinhu chipatsanurwe muzvikamu zvidiki kwazvo. Iwe unogona zvakare kushandisa mashandiro echigadzirwa chinobvumira mvura kupararira nekufumura madonhwe madiki madiki senge apfapfaidzo.
Zvakachena: mvura ndiyo solvent yese. Nemvura unogona kuchenesa mhando dzese dzezvinhu. Steam inogona zvakare kushandiswa pakuchenesa. Kuburikidza nemidziyo inoshandisa yakamanikidzirwa steam steam technology, inobvumira kuwedzera simba uye kuchenesa zvese zvakasvibisa mavara seaya anoungana pamapeti, fenicha kana zvipfeko.
Hydration: Iyo yekubika nzira yekubika inokurudzirwa zvakanyanya kune ese ane hutano chikafu nekuti inobvumidza kuchengetedza mavitamini, zvinovaka muviri uye nemvura yechikafu chaicho.
Nyadzisa: mazhinji emidziyo yekunyaradza anokwanisa kugadzirisa mamiriro ezvakatipoteredza nekuwedzera humidity. Kune akatiwandei emhando dze humidifiers zvinoenderana nekuti anopisa mvura ye ultrasound here kana ayo anozviita kuburikidza nekupisa. Iyo yekupedzisira inosarudzika kushandisa munguva yechando sezvo ichiwedzerawo tembiricha iri mukati zvishoma.
Sezvatakambotaura pakutanga kwechinyorwa, mweya wemvura wakakosha zvakanyanya muchimiro. Kuvapo kwaro mumhepo ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha. Uye ndeyekuti iyo yakakosha chikamu cheiyo hydrological kutenderera iripo muhuwandu hwakawanda. Ivhareji yevasungwa mumhepo yakatenderedza 3%. Munzvimbo dzakawoma kana dzinotonhora zvakanyanya senge matanda, iko kusungwa kuri pasi.
Kunyangwe isingawonekwe neziso rakashama, pazuva rakajeka pane kuvapo kwemvura yemvura. Kunze kwekuti sezvo iri gasi risina ruvara kana hwema, harinyatso kunzwisiswa nepfungwa, kusiyana nemakore anoumbwa nemadonhwe emvura emvura uye nekudaro anogona kuonekwa. Ndiyo gasi inodziyisa yakawanda kwazvo mumhepo uye ndiyo ine simba kwazvo kupfuura zvese nekuda kwemakemikari ayo. Iyo inodziya nyika, hunowedzera hutsi hwemvura hwaive mumhepo sezvo mwero wekusimuka kubva mumakungwa, nyanza uye mimwe miviri yemvura pasi ichiwedzera.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve mvura mhute uye ayo maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Mvura yemvura
Zvinokonzera kupisa kwepasi